Fikarohana momba ny firaisana Tantara taloha momba an'i John B. Gordon | Jeff Keene: Tari-panahy, fanahy ary fanahy ao anaty tranga Reincarnation ary Ahoana no ahafahan'ny porofon'ny Reincarnation mitondra fandriampahalemana - fikarohana Reincarnation
Ahoana no nahatonga izany? Torohevitra manokana na ara-panahy
Mpikaroka: Jeff Keene, lahatsary omena ao amin'ny pejy voalohany
From: Omaly olona hafa: ny jeneraly mivondrona sy Connecticut Yankee: fiainana taloha naseho
Ny porofon'ny fitambaran'olom-bary indray dia mety hahatonga ny Epileodes amin'ny 911
Jeffrey Keene dia mpilatsaka an-kerim-pireharehana misotro ronono ary Assistance Fire Fire of Westport, Connecticut. Taorian'ny fandringanana ny Foibe Ara-barotra Iraisam-pirenena tao 2001, Keene dia nahazo fitsidihana manokana momba ny "Ground Zero." Misy fifandraisana eo amin'ireo departemanta roa ireo, satria ny mpandroba ao Westport dia manana fomban-drazana "mitaingina" miaraka amin'ny Rescue #1 Fire Department de la Ville de New York. Mpikambana iraikambinifolo tamin'ity vondrona elit ity, namoy ny ainy ny Rescue #1 ny marainan'ny volana septambra 11, 2001.
Ny porofon'ny fahaterahana indray dia mahasakana ny loza toy izany, satria asehon'io porofo io fa afaka miova ny fanahy ny fivavahana, ny tanindrazana, ny lahy sy ny vavy ary ny firazanana manomboka amin'ny fiainana ka hatramin'ny iray hafa.
Trangam-panjakan-tsarimihetsika iray izay nahatonga ny mahagaga ny mahazatra
Jeff Keene, ao amin'ny bokiny. dia nanoratra toy izao: "Toy ny ankamaroan'ny olona, ​​dia tafintohina aho tamin'ny fiainana an-tsaina ny raharaham-barotra nataoko fony izy rehetra dia nanomboka nanohy ny diany niaraka tamiko. Tampoka teo, dia nanjary nahatsapa hevitra ny fahagagana ka nanjary fisehoan-javatra tsotra sy hafahafa nandritra ny fiainako.
Vetivety foana aho dia nahita ny tenako teo amin'ny pejy voalohany tao amin'ny gazety iray malaza ary nasongadina tao amin'ny fanadihadiana momba ny Arts and Entertainment Network mitondra ny lohateny hoe, Ankoatra ny fahafatesana. Tonga teo amin'ilay teboka ilay teny hoe "fifandrifian-javatra" nitafy faran'izay manify, nanapa-kevitra ny hanaiky ny zava-misy fa notarihina aho ary nanokatra ny tenako tamin'izay tian'ny fiainana haseho ahy. Fotoana ela taorian'ny naharesy lahatra ny fiainana taloha, ny fisehoan-javatra tsy mahazatra dia nanamafy ny fehin-kevitro, hany ka ny hany antony nahatongavako hanana fanambarana toy izany dia ny fizarako azy ireo amin'ny hafa. ”
Ny tari-dalana ara-panahy dia mamely an'i Jeff Keene manodidina toy ny kitapom-bola
Niresaka tamiko i Jeff fa ny tanjon'ny tari-dàlana nandritra ny fikarohana nataony taloha dia efa matanjaka be ka nahatsapa fa toy ny tontolo ara-panahy no nanosika azy "toy ny kitapom-bola." Nanomboka tamin'ny volana 1991 ny tantaran'i Jeff fony izy teo fialan-tsasatra miaraka amin'i Anna vadiny. Nikaroka antitra izy ireo ary nijanona tao Sharpsburg, Maryland, izay nisy ny ady ady tany Antietam. Na dia mbola tsy namaky boky momba ny Ady sivily aza i Jeff na tsy nisy fiantraikany tamin'io vanim-potoana io, dia tsapany fa voatery nitsidika ny kianja izy.
Tondra-drano tamin'ny fihetseham-po niainany tany amin'ny lalana Sunken
Ao amin'ny ampahany amin'ny saha antsoina hoe Sunken Road, i Jeff dia nihaino ny famoahan-kevitry ny horonam-peo tamin'ny horonan-tsary izay natao tao amin'ny 1862. Ny ady dia nahitana fitondrana antsoina hoe Alabama fahenina, izay nodidian'ny Kolonely John B. Gordon. Taorian'ny fihainoana ilay kasety, raha nandehandeha teny amin'ny lalam-pambolena tranainy izy, dia tsy nahalala an'i Jeff tao amin'ilay faritra nalain'i Gordon sy ny lehilahy. Eto amin'ity toerana ity, i Jeff Keene dia nanao izao fihetsiketsehana manaraka izao:
“Nisy onjam-pahoriana sy alahelo ary fahatezerana nandalo tato amiko. Tsy nisy fampandrenesana dia tototry ny fahatsapana tampoka aho. Ranomaso nirehitra no nidina teny amin'ny takolako. Nanjary sarotra ny miaina. Nisavoana rivotra aho, rehefa niova endrika tamin'ny arofanina taloha aho. Hatramin'izao dia tsy afaka milaza aminao aho hoe firy ny fotoana lasa, saingy rehefa lasa ireo fahatsapana ireo, nandalo io entana be loatra ara-pientanam-po io, dia hitako fa reraka toa nanao hazakazaka hazakazaka marathon aho.
Nisandrahaka ny dian-dranomandry hivoaka ny lalana, nitodika aho ary nitodika. Somary nihomehezana aho mba hilaza ny kely indrindra ary nanontany tena momba izay vao nitranga. Sarotra ny niverina tany amin'ilay fiara satria nahatsapa ho malemy aho.
Niverina tamin'ny laoniny ny ankamaroan'ny fitoniako mahazatra aho ary tsy nilaza na inona na inona tamin'i Anna momba ny zava-nitranga. Inona no azoko lazaina? Ahoana no anazavako azy aminy? Tsy nanana aho fa tsy nanana valiny, fanontaniana fotsiny. ”
Talohan'ny nandaozan'i Sharpsburg, dia nitsidika fivarotana fanomezana i Jeff sy i Anna. Gazety iray, Ady amin'ny ady an-trano (fanontana manokana, Antietam), nisambotra ny mason'i Jeff ary nividy azy, niaraka tamin'ny bala fahatsiarovana hita tao amin'ilay faritra. Tao an-trano i Jeff dia nametraka ilay gazetiboky tao anaty solaitra iray izay nitazona ny boky an-taribeny, na dia tsy nijery ny diariny aza izy hatramin'ny herintaona sy tapany taorian'izay.
Fanambarana ara-tsaina iray ary i Jeff dia nihiaka hoe: “Tsy mbola izao!” Fahatsiarovana ny fiainana taloha
Tamin'ny oktobra 1992, nanatrika lanonana Halloween iray i Jeff sy Anna. Nisy mpampihorohoro nantsoina hoe Barbara nokaramaina mba hanome famakiana amin'ny lanonana. Rehefa niverenan'i Jeff izy dia nanontany momba ny traikefany tao amin'ny Sunken Road. Niteny tamin'i Jeff i Barbara fa miaramila izy ary avy eo dia notifirina feno lavaka tao amin'io toerana io. Nidina haingana teo ambonin'ny vatany izy, izay nandainga, izay toa tsy nanana aina, tao amin'ilay tany nihosin-dra. Hoy i Barbara avy eo, "Rehefa nibodo ny vatanao nidina ianao, dia tezitra be ianao ka tsy nanenina!" Hoy i Jeff fa nisy fiatoana tamin'izay fotoana izay. Nanitsy an'i Barbara i Jeff, noho ny antony tsy fantatra taminy, ary nihiaka hoe: "Mbola tsy!"
Ny ampitson'io dia nanapa-kevitra i Jeff fa fotoana izao hamakiana ny gazetin'ny fahatsiarovana ny ady tao Antietam izay novidiny tamin'ny May 1991. Nieritreritra indray i Jeff fa io no gazetim-panjakana voalohany nividianana azy hatramin'izay. Nosokafan'i Jeff ny takelaka iray izay nanana sarin'i Sunken Road; Io toerana io dia i Jeff no niaina ny tondra-drano hafahafa mahatsiravina. Rehefa namakivaky ilay lahatsoratra izy, dia nahita teny iray hoe: "Tsy izany." Nitsangana teo amin'ny tendany ny volony.
Rehefa namaky teny i Jeff, dia nahafantatra fa "tsy" dia baiko naverimberin'ny Colonel John B. Gordon tany Alabama fahenina. Nanatona ny tafika Yankee ary nitebiteby ireo lehilahy tao Alabama. Tsy nomena ny baiko handrehitra an'i Gordon raha tsy mihoatra ny roapolo metatra ny tafi-panjakana. Gordon tenany ihany no voatanisa, momba ny fihaonana:
"Be dia be ny mozika nipoitra avy tamin'ilay lalan-kaleha. Nirotsaka ny basy ary nipararohiko ny tarehin'ny Federa toy ny rivotra marevaka. Ny vokany dia mahatsiravina. "
Ny famakiana an'i John B. Gordon dia mitondra safo-toetran'ny fiainana taloha
Rehefa namaky ny andalan-tenin'i Gordon izy, dia nanomboka nahatsapa fihetseham-po mitovy amin'izay tsapany tao amin'ny Sunken Road i Jeff, ary nitomany ny ranomasony. Navoakan'ny lahatsoratra avy eo ny faharavan'i Gordon.
"I John B. Gordon avy ao amin'ny Alabama Sixth dia tratra teo amin'ny sandriny havia, ny soroka havanana ary indroa teo amin'ny tongony havanana talohan'ny nandaozany ny fahaverezan'ny ra taorian'ny nahazoany ratra tamin'ny tarehy."
Jeff tenany no manoratra ny zava-nitranga taorian'izay. "Niverina namaky ilay pejy niaraka tamin'ny sarin'ny làlana Sunken aho, ary sary iray hafa tao amin'ny pejy teo amboniny. Tamin'ity indray mitoraka ity dia nisy ranomandry nihazakazaka namakivaky ahy ary nijoro indray ny volo teo amin'ny tendako. Ny sary dia ny Jeneraly Brigadier John B. Gordon. Ny tarehimarika dia tsy nahalala ahy, fantatro tsara izany, nokaramaiko isa-maraina. "Jeff dia nanamarika fa ao amin'ny soratra Gordon dia fantatra amin'ny maha-jeneraly azy, fa ao amin'ny lahatsoratra Gordon dia fantatra amin'ny maha-kolonely azy tamin'ny fotoana nandratra azy. Toa niaina ny ady tao Antietam i Gordon.
Ao amin'ny bokiny, i Jeff dia mamaritra ny fomba nahatonga azy ho tadidin'ny fahatsiarovany ny fiainany toa an'i John B. Gordon. Jeff koa dia mamaritra ny fahazarana sy ny toetrany miaraka amin'i Gordon. Tafiditra amin'izany ny safidy hiorina amin'ny fitaovam-piadiana, ny akanjo toy izany ary ny ratra eo amin'ny tavany sy ny vatany izay maneho ny ratin'i Gordon.
Fisehoan-javatra Phenomena sy hetsika synchronistic amin'ny tranga Reincarnation
I Jeff dia mamaritra toe-javatra roa miavaka izay nifandraika tamin'ny tantaram-pinoana naterany tamin'ny maty. Ny iray dia nahitana ny baiko nosoratan'ny Jeneraly Lee tamin'ny Septambra 9, 1862, izay namaritra ny tetiky ny Tafiky ny Confederate mba hanafika ny Avaratra. Navoaka ny kopian'ny laharana; Kopika tokana iray very teo amin'ny fandehanana ary noraisin'ny miaramila Union. Ity vaovao ity dia nanome fanazavana amin'ny antsipiriany momba ny toerana misy ny tafika Konfedera ary nitarika ny ady tao Antietam. Amin'ny ampahany, ny baiko voasoratra tamin'ny Septambra 9 dia nitarika ny fifandonan'ny ady an-trano izay nahatonga an'i John B. Gordon naratra mafy ary saika maty. Ny hetsika an'ohatra amin'izao androntsika izao dia ny andro nahaterahan'i Jeff Keene ny Septambra 9.
Hetsika ara-panoharana iray hafa nahatafiditra ny datin'ny 9 septambra niseho tamin'ny tsingerintaona faha-30 an'i Jeff Keene. Tamin'io andro io dia nentina tany amin'ny efitrano fitsaboana maika i Jeff mba hotsaboina noho ny fanaintainan'ny tarehy sy ny hatoka. Ny dokotera dia tsy nahita antony ara-batana noho ny aretin'i Jeff. Ny toerana nisy ny fanaintainany dia nifanandrify tamin'ny ratra tamin'ny tarehy sy ny hatoka nahazo an'i John B. Gordon tao Antietam. 30 taona i Gordon tamin'ny fotoana naratra; Ny fanaintainan'ny tarehin'i Jeff dia niseho tamin'ny 9 septambra 1977, faha-30 taonany. Ity tranga ity dia toa maneho ny fisehoan-javatra nahatratra ny fitsingerenan'ny taona nahaterahan'i Gordon. Tadidio fa ny fitsidihan'i Jeff tao amin'ny efitrano fitsaboana vonjy maika dia nitranga tamin'ny 1977, izay 15 taona talohan'ny nahafantaran'i Jeff ny fifandraisany tamin'i Gordon.
Ny firazanana indray ao amin'ny vatana: Mijanona ho toy izany ny linguistic writing style
Ao amin'ny bokiny, i Jeff dia ahitana antontan-taratasy mampiseho ny fitoviana amin'ny fomba fanoratana. Taona maro taty aoriana dia nanoratra boky iray ny Jeneraly Gordon Fahatsiarovana ny ady an-trano, izay nanome fanazavana momba ny fandinihan'i Jeff. Andeha isika hampitaha andinin-tsoratra roa, iray amin'ny bokin'i Gordon, mamaritra ny ezak'ireo lehilahiny hamoaka afo ao Wrightsville, Pennsylvanie, ary iray avy amin'i Keene mikasika ny valintenin'ny sampan-draharahan'ny firehan-java-mahatsiravina. Ny fandinihako dia hoe ireo antontan-taratasy roa ireo dia toa voasoratra ao anatin'ilay "feo" iray ihany.
Raha ny fangatahako, Miriam Petruck, Ph.D., profesora mpampianatra momba ny fiteny ao amin'ny Oniversiten'i Kalifornia, Berkeley, dia nanao fanadihadiana momba ny fandikana ireo tahirin-kevitra ireo, izay atolotra amin'ny faran'ity fitantarana ity. Ity famakafakana ity dia nanamafy fa ireo andininy roa ireo dia manana fitoviana mitovitovy. Ity fanadihadiana ity dia mampiseho fa ny endrika hita amin'ny endriky ny endriny dia tsy mifanaraka amin'ny fiainana mandra-pahafatiny, fa ny fomba soratantsika sy ny fifandraisana dia afaka mitoetra ho mitovy. Miseho fa isika ihany no ao an-tsaintsika avy amin'ny fampodiana iray hafa. Ny tarehin-javatra ihany no toa miova.
Fomba fanoratana ny fiainana taloha: John Gordon (avy amin'ny fahatsiarovana ny Ady sivily):
“Tamin'ny hery be no niasan'ny oloko hamonjy ilay tetezana. Niantso ny mponin'i Wrightsville aho mba homena siny sy paila, nefa tsy nisy hita. Tsy nisy tsy ampy ny siny sy ny paila fotoana vitsy taty aoriana, rehefa nirehitra ny tanàna… Niasa tamim-pahavitrihana sy tamim-pahasahiana ny oloko mba hamonjy ny tanàna tahaka ny nanavotana ny tetezana. Raha tsy misy milina mpamono afo na fitaovana hafa, ny hany fotoana nisamborana ny fivoaran'ny afo dia ny nanangana ny oloko nanodidina ny faritry ny may, niaraka tamin'ny sisiny teo amoron'ny renirano, ary nandalo haingana avy teny an-tanana ka nanolotra ny paila rano. Noho izany, ary tamin'io ihany, no nihaona ilay afo nirehitra, ary tamin'ny ora alina dia nanamarina sy resy izy. ”
Fiafaran-tenan'ny fiainana teo aloha: Chef Jeffrey Keene, mpanampy (avy amin'ny taratasiny ho an'ny Westport, CT, Fire Chief):
“Niverina tamin'ny laoniny ny onjam-peoko, nampidirina ny herin'olombelona sy ny fitaovana ary napetraka teo ambanin'ny fitarihan'ny lietnà lefitra lietna Christopher A asas. Teo am-pananganana drafi-pandaminana iray dia naneho fahaiza-misaina, fahalalana, fanofanana ary fiahiahiana lalina ny fiarovana ireo mpamono afo teo ambany fibaikoany ny lietnà Aomona. Entona be dia be no niditra tao amin'ilay varavarankely tamin'ny varavarankely misokatra. Na dia nanandrana nanala izay mety ho loharanon'ny firehetana rehetra aza izahay dia afaka nanala azy rehetra, afa-tsy ny roa ihany. Nampandre anay ny tompon-trano fa nisy fatana nirehitra solika sy heater rano mafana tao an-trano. Tsy nisy fomba hanidiana azy ireo na avy ao anatiny na any ivelany. Tamin'ny fampiasana fitaovana fandrefesana, mpankafy tsindry miabo sy fisokafan'ny varavarankely sy fanidiana no nesorina ny loza. ”
Fanahy Masina, tari-dalana ara-panahy na ara-panahy ao amin'ny Trano firaisam-poana
Azafady azafady fa azo inoana fa tsy hitan'i Jeff Keene teo amin'ny Sunken Road, toerana naharatrana mafy an'i John B. Gordon, sendra azy. Raha ny tokony ho izy, mino aho fa ny fanahy iray na ny fanahin'i Jeff manokana dia nitarika azy tany Sharpsburg aloha, avy eo nankany Antietam sy ny Sunken Road. Raha vao tonga tany, ny fientanam-po mahery vaika, izay toa nateraka tamin'ny toerana nisy ny fiainana taloha izay manan-danja lehibe, dia nitarika an'i Jeff hamaha ny raharaha momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao indray. Ny fanahin'i Jeff ihany dia mety nandray anjara tamin'ny fahatsapana fihetseham-po mahery vaika tao Sunken Road. Araka izany, ny fanahy fanahy na ny fanahin'i Jeff dia tompon'andraikitra tamin'ny famahana ity tranga reincarnation tena lehibe ity.
Ny firaisam-po amin'ny fanahy ao amin'ny fanahy
Araka ny voalaza ao amin'ny fizarana Ireo Fitsipiky ny Fampodiana an-tokantrano, ny olona miorina indray amin'ny vondrona, mifototra amin'ny karma mizara, fihetsiketsehana ara-pihetseham-po ary tetikasa iraisana. Noho ny fiheveran'ny vondrona vaovao dia samy niahiahy i Jeff sy ireo mpiara-miady aminy tao Westport, Connecticut, ny Sampan-drahonana Firehan-dry zareo dia ireo mpomba an'i John B. Gordon nandritra ny ady an-trano. Taorian'izay dia nametraka lalao maromaro i Jeff teo amin'ny mpiara-miasa ao amin'ny trano fandevenana sy ny mpiambina niady tamin'i Gordon.
Iray amin'ireny fampirafesana efa niaina taloha ireny, izay mampiseho fitovozan-kevitra manahirana amin'ny fitoviana ara-batana, dia midika fa ny Cadres Wilcox, Confederate General sy Firefighter Wayne R. Zaleta. Ireo sary mampitaha ny Jeneraly Wilcox sy Mr. Zaleta dia omena ny marina. Nilaza i Jeff fa manana toetra mitovy amin'izany koa i Wilcox sy Zaleta.
Raha ny momba ny fahatsiarovan-tenan'ny fiainana taloha, dia mamaritra karazana telo i Jeff. Voalohany, nandritra ny andiam-panadihadiana, nahafehy ny tsipiriany momba ny fiainany toa an'i Gordon i Jeff. I Jeff no nanatanteraka ireo fisaintsainana ireo alohan'ny hamakiana azy Fahatsiarovana ny ady an-trano. Nanadihady ireo traikefa ireo izy ary afaka nanamarina tsipiriany maromaro tamin'ny bokin'i Gordon sy loharano hafa.
Ny karazana fahatsiarovan-tena faharoa dia midika amin'ny fahafantaranao amin'ny antsipiriany ny antsipiriany momba ny fiainan'i Gordon nefa tsy nianatra ny vaovao avy amin'ny loharano hafa. Ohatra, nitsidika ny foiben'ny mpitsidika i Jeff, izay nipetrahan'ny artifacts iray momba ny lanonam-panafahana nataon'ny Confederate. Nandray anjara tamin'io lanonana manokana io i Gordon. Ny sary dia naneho ny fametrahana ny lanonana, feno ny sainan'i Gordon sy ny mpiara-miasa aminy mpiara-miombon'antoka amin'ny famonoana.
Fantatr'i Jeff fa ny sainam-pirinty tao amin'ny fampiratiana dia tsy ny sainam-pirenena nampiasaina tamin'ny lanonana. Fantatr'i Jeff ny sainam-piarahamonina marina avy amin'ny karazana naseho tao amin'ny foiben'ny mpitsidika. Rehefa nanadihady ny mpiasa izy dia nanamarina fa ny sainam-pirenena tao amin'ny fampiratiana dia avy tamin'ny vanim-potoana taty aoriana ary namantatra an'i Jeff ny sainam-pirenena tena izy nampiasaina nandritra ny lanonana.
Ny karazana fahatelo fahatsiarovan'i Jeff dia niaina dia azo antsoina hoe fahatsiarovana ara-pihetseham-po, araka ny voatanisa tao amin'ilay zava-nitranga tao amin'ny Sunken Road, izay nahatonga an'i Jeff ny fihetseham-po mahery vaika tamin'ny famerenana indray ny zava-nisy tamin'ny trauma taloha.
Ity hetsika ity dia azo jerena ho ohatra amin'ny fitarihana avy amin'ny tontolo ara-panahy, izay nokasain'i Jeff ho any amin'ny toerana izay nahafaty azy teo amin'ny Sunken Road tao amin'ny Ady sivily. Ity fizarana ity dia azo jerena ho ohatra amin'ny Toro-hevitra Geographic sy Memory Memory.
Jeff Keene tamin'ny fasan'ny fiainany taloha sy ny fomba ahafahan'ny porofon'ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao hitondra fiadanana
Jeff Keene dia nieritreritra fa nandritra ny ady an-trano, dia jeneraly tao amin'ny Tafika Confederate Atsimo izy, kanefa amin'izao fiainana izao dia miaina any Avaratra izy. Jeff dia nanamarika fa razamben'ny ady niarahany tamin'ny Tafiky ny Firaisana Sovietika ary raha toa ka i John B. Gordon izy dia mety nandeha niady tamin'ny razany avy amin'ny vanim-potoanan'i Connecticut ankehitriny.
Ny firazanana ao amin'ny vatana dia manome antsika fomba fijery samihafa amin'ny ady, izay mampiseho antsika fa ny ady tsy misy dikany dia mikasika ny fiainana sy ny loharano.
Te-hitondra ity toko ity miaraka amin'ny fizarana nalaina tao amin'ny bokin'i Jeff Keene aho, Misy olona iray hafa omaly. Izy io dia manana fidirana lehibe ho an'ny vanim-potoana iainantsika, noho ny habetsaky ny fifandonana hita eto amin'ny planetantsika ankehitriny. Mariho fa ny andalan-teny dia avy amin'ny olona iray izay, tamin'ny andro taloha, iray amin'ireo jeneraly ady lehibe indrindra novokarin'i Etazonia. Saintsaino ny fomba fanamafisana ny fahatakarana ny vatana vaovao ao amin'ny vatana vaovao na dia mahery fo eny an-tsahan'ady aza. Jeff Keene nanoratra:
“Miato kely ary eritrereto hoe hanao ahoana izao tontolo izao raha voaporofo fa zava-misy eo amin'ny fiainana ny vatana vaovao. Ahoana no fomba hitondrantsika ny hafa? Rehefa mifandray amin'ny fianakaviana, namana na olom-pantatra dia mila manontany tena toy ny hoe: Iza ireo fanahy ireo? Inona no ifandraisan'izy ireo amiko? Tokony hianatra zavatra amin'izy ireo ve aho sa tokony ho Mpampianatra azy ireo? Tsy misy farany ny azo atao. Ao amin'ny trano iray ihany isika rehetra ary mihalehibe isan'andro io trano io. Ity planeta ity dia nanjary “Village Global.” Tsy mila ny teny voasoratra intsony intsony ny milaza ny fisehoan-javatra amin'ny lafiny hafa amin'ny tany. Afaka mipetrapetraka sy mijery hetsika miseho isika amin'ny alàlan'ny fitsipiky ny switch. Ny firenena rehetra dia misy fiatraikany amin'ny hafa amin'ny volany, olan'ny fandotoana ary ny tsy fankahalana kely. Ankehitriny mihoatra ny hatramin'izay dia mila manova ny fomba fisainany ny tsirairay. Tsy izaho intsony, fa US. Tsy misy intsony Izy ireo, fa isika. Mamela marika ho an'ny tenantsika sy ireo manodidina antsika isika, koa andao isika hiezaka hampiasa fikitihana malefaka. ”
Ao amin'ny sary omena ny marina, dia i Jeff Keene no mipetraka ao amin'ny fasan'i John B. Gordon, ny fiainany taloha.
Reincarnation sy endrika ara-batana: Ny raharaha Jeff dia manome iray amin'ireo ohatra manaitra indrindra amin'ny fomba mety hijanonan'ny fisehoan'ny tarehy mitovy amin'ny tranga teraka ao amin'ny vatana vaovao. Ny fitoviana amin'ny endrika dia manaitra.
Reincarnation & Talenta taloha: Ny fomba fanoratra amin'ny fiteny dia afaka mijanona ho tsy miova: Raha ampitahaina amin'ny tantara nosoratan'i John B. Gordon sy Jeff Keene, dia hitantsika fa ny fomba fifandraisantsika, ny fomba fiasan'ny saintsika, dia mety mitoetra ho toy izany ihany koa amin'ny tranga momba ny firaisana amin'ny vatana. Isika dia mitovitovy tanteraka amin'ny fiainana mandra-pahafaty, ny toe-javatra sy ny lesona ihany no manova avy amin'ny fampodiana ho an'ny hafa. Ny fikarohana ara-tsiansa ara-tsiansa mampitaha ny fomba fanoratra nosoratan'i Gordon sy Keene dia omena etsy ambany.
Ny Fanahy dia ny fandraisana anjara amin'ny trangan'aretina ao amin'ny vatana: Ny fifandisako dia ny tsy nahitana fa i Jeff Keene dia nandeha tany amin'ny toerana iray tao amin'ny Sunken Road izay nahafatesany teo amin'ny ady an-trano toy ny John B. Gordon. Azo inoana fa nentin'ny fanahy masina izy, na ny fanahy iray, mba hahafahany hiaina fihetseham-po mifandray amin'ny fiainany taloha. Ity tranga ity dia tena mitovy, indrindra indrindra, Ny kapitenin-dry Robert Snow dia nitarika ny sarin'ny vehivavy miondrika ao New Orleans, izay nahafahan 'ny Kapiteny Snow hamaha ny tranga vao teraka indray.
Amin'ny toe-javatra toy izany ao amin'ny vatana vaovao, izay ahitana ny fandraisana anjara ara-panahy dia hita fa ny zavamananaina any amin'ny tontolon'ny fanahy dia maniry antsika hahafantatra ny fiainantsika taloha.
Ny vondrona fanahy ary ny fifandraisana amin'ny fifandraisana amin'ny vatana vaovao: Jeff dia nanambara mpikambana maro tao amin'ny trano fonenany izay inoany fa niady taminy tao amin'ny Ady Sivilizasiona. Ohatra iray ny momba an'i Wayne Zaleta, izay inoan'i Jeff fa ny firaisana amin'ny vatana vaovao any Cadmus Wilcox. Sary mampitaha an'i Wilcox | Zaleta dia omena etsy ambony.
Fiovana eo amin'ny resaka politika: I Jeff dia nanamarika fa amin'izao fotoana izao, teraka tany avaratr'i Etazonia izy ary maneho ny tenany ho Connecticut Yankee. Amin'ny maha John B. Gordon azy dia Soutner no niady teo amin'ny sehatry ny Confederate tao amin'ny Ady sivily. Nieritreritra i Jeff fa ny razambeny tamin'ny androm-piainany amin'izao fotoana izao dia mety mbola niady taminy tao amin'ny Ady Sivilizasiona.
Amin'izany, ity dia tranga iray hafa izay mampiseho fa ny fiaraha-monina sy ny politika dia afaka miova avy amin'ny fampodiana iray mankany amin'ny iray hafa, izay mampiseho fa tsy misy dikany ny ady amin'ny ho avy.
Famintinana ny fanadihadiana momba ny fanabeazana aizana ao amin'ny Reincarnation amin'ny fampitahana ireo taratasy nosoratan'i Gordon sy Keene
Nataon'i Miriam Petruck, Ph.D., University of California, Berkeley
1. Manakaiky ny isan'ireo teny isaky ny fehezanteny: Gordon-21; Keene-18
2. Fampiasana sazy mitambatra:
Gordon: "ny hany azoko atao mba hisamborana ny fandroson'ny lelafo dia ny hamolavola ireo lehilahy eo amin'ny distrika mirehitra, miaraka amin'ny sisin-dàlana miorina eo amoron'ny renirano, ary mandalo haingana amin'ny tànana mba hampisotro rano."
Keene: "Raha nametraka ny tetikasam-panatanterahana i Lieutenant Ackley, dia nahita fahatsapana mahazatra, fahalalana, fampiofanana ary fiahiana lalina ho an'ny fiarovana ny mpamono afo eo ambany baikony."
3. Fampiasana fehezanteny voatondro amin'ny sazy sarotra:
Gordon: "Raha tsy misy mpamono afo"
Keene: "raha nanangana ny drafitra fihetsika."
4. Ny fampiasana ny fisiana ivelany - misy sazy mitranga:
Gordon:: Tsy nisy ny siny. "
Keene: "Tsy nisy fomba hanesorana azy ireo."
5. Fehiben'ny adverbial eo am-piandohan'ny sazy:
Gordon: "amin'ny hery lehibe," "Amin'ny tsy fisian'ny fiara mpamono afo"
Keene: "Naverina tamin'ny radio aho."
6. Ny ankamaroan'ny lahatsoratra dia amin'ny feo mahery, afa-tsy amin'ny farany. Ao amin'ireo andalana roa ireo, ny fehintsoratra dia mifarana amin'ny fe-potoam-pitenenana, toy ny hoe tonga ny fahombiazana raha tsy misy ny fidirana amin'ireo mpandray anjara. Ny fientanam-po dia tratra amin'ny fanovana ny fanamafisana ny teny antenaina, manasaraka ny ampahany roa amin'ny matoanteny.
Gordon: "dia ny fandrosoana, ny firehetam-po miangona, ary tamin'ny faran'ny ora amin'ny alina nanamarina sy nandresy."
Keene: "Mampiasa fitaovana fitsaboana. . . Nesorina ny loza. "
Fanamarihana avy amin'ny Dr. Petruck:
Raha jerena ny fitoviana efa voamarika, tsy maintsy manana ny lisansa momba ny mpanoratra ihany koa isika. Amin'ny ankapobeny, satria kely dia kely ny lahatsoratra ary ny fanadihadiana dia (tsy maintsy atao) voafetra ho amin'ireo singa fototra ara-drafitra, ny fanambarana momba ny mpanoratra dia, raha ny tena marina, dia misedra. Ny famakafakana hafa dia ilaina mba hahazoana fitarainana mahery vaika amin'io lafiny io.
Ny andalan-tsoratra lehibe kokoa izay tsy voafaritra dia hanamora ny fitsapana hafahafa amin'ny fiteny samihafa. Ankoatra izany, dia tokony ho fandalinana ny handinihana andinin-tsoratra masina toy izany mba hamaliana fanontaniana hafa momba ny endri-tsoratry ny andininy. Ohatra, mampiasa voambolana miavaka ve izy ireo? Moa ve ireo andinin-teny ampiasaina ampiasain'ny karazana voambolana (combinations) amin'ny teny iombonana? Misy tsy fandefena diso na fanononan-teny, na fehezanteny maromaro kokoa amin'ny ankapobeny.